Sidee Internetku U Ekaan Doonaa Qarniga Xiga? | Martech Zone
Inaan ka fikiro in caruurtaydu ku korayaan da 'yar oo uu internetku had iyo jeer halkaan ku yaalo waa wax aad loola yaabo. Xaqiiqda ah inaan ka soo dhaqaaqnay garaacid fudud oo aan ku haysanno daraasiin qalab guryaheena ah oo isku xiran, duuban, oo naga caawinaya inaan maalin walba wadno waa cajiib. Ka fikirida 100 sano kadib waa wax ka fog aragtideyda. Qaraxa mobilada iyo aaladeena marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya, waxaan qiyaasi karaa oo kaliya in bandhigyadu ay meel walba joogi doonaan aaladaha mobiladuna ay noqon doonaan wax kasta oo aan ka joogno daruuraha.
Shaki kuma jiro in wax walboo la xiriiri doono lana hagaajin doono. Qaboojiyeyaasheena ayaa si otomaatig ah u tuuri doona cuntadeena oo wax walbana loo gaarsiin doonaa, iyada oo loo marinayo cuntada, qorshayaasheena. Baabuurtayadu way is wadi doonaan. Waxaan qiyaasi karaa oo kaliya in qaarkeen xitaa iskaa wax u qabso ku shaqeyn doonaan si loo xidho jeer buuxa - laga yaabee aaladaha loo beeray si loogu duubo muuqaalkeena iyo maqalkeena sida loogu baahdo. Waxaan haysan doonaa nooc ka mid ah qalabka saadaalinta si aan u soo qaadno codsiyadayada ama fariimaha aan u dirno meel kasta oo aan joogno - oo leh maqal iyo muuqaal fiidiyoow ah oo aan dhib lahayn. Laga yaabee in isku soo duubid ama isku soo duubid ay ku jiri doonaan boorsooyinkeena.
Waxaan u maleynayaa inaan sidoo kale yeelan doono kuwa xun, sidoo kale. A internetka madow taasi waa tan ugu cabsida badan ee aadamiga aan la garanaynin ee sugaya inay ku siiyaan wax kasta oo aad ugu baahan tahay bilig bilig u noqoshada. Ok… Ma doonayo inaan ka sii fikiro tan.
Tags: 100 sano201421102111211221132114qarnigiiinternetinternetka 100 sanoTechnology